अनौठो सेलिब्रेसनबारे शम्सीको खुलासा ! - Khelpati
अनौठो सेलिब्रेसनबारे शम्सीको खुलासा !
शनिवार, जेठ १०, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाका स्पिनर तबरेज शम्सी आफ्नो अनौठो सेलिब्रेसनको कारण प्रख्यात छन् । उनले आफ्नो समर्थकलाई फरक फरक सेलिब्रेसनले सधैं प्रसन्न गराउँदै आएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको घरेलु लिग एमएसएलमा उनले मास्क निकालेको सेलिब्रेसनलाई त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।
शम्सीले क्रिकेटमा विकेट हात पार्दा जुताको फोन बनाउने देखि जादुमय सेलिब्रेसन गर्दै आफू र समर्थकलाई प्रसन्न गराउँदै आएका छन् ।
शम्सीले आफ्नो अनौठो सेलिब्रेसनको राज हालै मात्र खुलासा गरेका छन् । घरेलु एक प्रतियोगितामा उनले विकेट लिएपछि आफ्नो जुत्ताले फोनको नक्कल गरेका थिए । त्यो सेलिब्रेसन निकै भाइरल भएको थियो ।
खासमा जुत्ताको फोनको सेलिब्रेसन भने अम्पाएरबाट सिकेको शम्सीले बताए । अम्पाएर फिल्डमा निर्णय लिन नसक्दा थर्ड अम्पायरको सहयोग लिने कुराकानी गर्ने तरिका चोर्दै उनले सेलेब्रेसन गरेको बताए ।
यस्तै उक्त खेलमा एबी डीभिलियर्स र आफूले एक ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेपछि सेलिब्रेसन गर्ने शैलीको योजना बनाएकाे र उक्त योजना खेलमा प्रयोग भएको बताए । तर, खेलको प्लेइङ सेटमा डीडिभिलर्स नरहेको कारण उनीसँग फोन गरेर खुसी मनाउन उक्त सेलिब्रेसन गरेको शम्सीले बताए ।
सेलिब्रेसन पछि शम्सीले निकै आलोचना समेत भोग्नु परेको थियो ।
'धेरै मानिसले मैले आफ्नो खेलमा भन्दा सेलिब्रेसनमा बढी ध्यान दिएको बताउँदै आएका छन्,' शम्सीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम लाईभमा भने, 'तर, यो मेरो क्षणलाई यादगार बनाउनको लागि मात्र फरक फरक सेलिब्रेसन गर्ने गर्छु ।'
यस्तै शम्सीले विकेट लिएपछि एक कपडा लिएर त्यसलाई लठ्ठी बनाउने सेलिब्रेसन समेत उत्तिकै चर्चित छ । उनले यो सेलिब्रेसन एमएसएलको उद्दघाटन सिजनमा पहिलो पटक गरेका थिए । त्यो यता उनले यो
सेलिब्रेसनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
'यो जादुमय सेलिब्रेसनको कारण म १६ वर्षको हुँदासम्म जादूगर बन्ने सपना थियो । तर, पछि क्रिकेटले त्यसमाथि पकड बनायो र क्रिकेटमा धेरै ध्यान दिएँ,' उनले भने, 'त्यसैले मैले धेरै जादू सिक्न सकिन । जादूगर बन्ने मेरो एक चाहाना थियो । यो कसरी भएको छ भन्ने थाहा नपाउनेहरुको आश्चर्यजनक अनुहार देख्दा निकै खुसी हुन्छु ।'
स्टोक्सको त्यो 'सिगरेट ब्रेक' !
बिग बास लिग डिसेम्बरबाट
स्मिथ शीर्ष स्थानमा यथावत
'गांगुली भन्दा धोनी उत्कृष्ट कप्तान'
न्युजिल्यान्डको प्रशिक्षण अर्को साताबाट
वेष्ट इन्डिजसँग इंग्ल्यान्ड पराजित
चार प्रशिक्षकलाई 'ए' लाइसेन्सको प्रमाणपत्र प्रदान
क्यान्सर पिडित प्रशिक्षक राईलाई आर्थिक सहयोग
अशोक उत्कृष्ट निर्णायक
मैदान फर्कन कति सम्भव ?